Abahlinzeki kanye Nefekthri yokupholisa ikhabethe le-Telecom - Abakhiqizi bokupholisa iKhabhinethi yaseChina Telecom
Isishintshi sokushisa seTelecom...
I-Thermosiphon Heat Exchanger...
Ikhabhinethi edidiyelwe yangaphandle yeBlackShields yakhelwe isiteshi sesisekelo sezokuxhumana esisabalalisiwe, esingahlangabezana nesicelo sendawo yokuxhumana yangaphandle nokufakwa. Ukunikezwa kwamandla kagesi, ibhethri, imishini yokusabalalisa ikhebula (i-ODF), izinto zokulawula izinga lokushisa (I-Air conditioner/I-Heat exchanger) ingahlanganiswa nekhabhinethi ukuze kuhlangatshezwane nesicelo sekhasimende njengesitolo esisodwa sokumisa.
BlackShields HC uchungechunge Combo Air conditioner yakhelwe njengesixazululo ukonga amandla ukulawula isimo sezulu ikhabethe endaweni inselele ngaphakathi endlini nangaphandle. I-AC Air conditioner edidiyelwe ene-DC Thermosiphon Heat exchanger, iyixazulula ngempumelelo inkinga yokushisa yekhabhinethi yasendlini/yangaphandle futhi izuze ukusebenza kahle okukhulu kwamandla.
Uchungechunge lwe-BlackShields HM lwe-DC Thermosiphon Heat exchanger yakhelwe ukulawula isimo sezulu sekhabhinethi yasendlini/yangaphandle endaweni yasendlini nengaphandle eyinselele. Iwuhlelo lokupholisa olwenziwayo olusebenzisa amandla okushintsha isigaba ukuze kuphole ngaphakathi kwekhabhinethi. Ixazulula ngokuphumelelayo inkinga yokushisa yekhabhinethi yangaphandle futhi isetshenziswa kabanzi emakhabetheni angaphakathi nangaphandle kanye nezindawo ezivaliwe ezinemishini ye-elekthronikhi ebucayi.
Le yunithi isebenzisa ngokugcwele umehluko wezinga lokushisa wasendlini nangaphandle. Izinga lokushisa elingaphakathi kwendawo ebiyelwe lipholiswa ngokusetshenziswa ngempumelelo kokuhwamuka kwesiqandisi. Ukushintshaniswa kokushisa okungenzi lutho kusekelwe ku-convection yemvelo, ezungeza uketshezi kuyisekethe eyiluphu evaliwe ngaphandle kokudinga iphampu evamile noma i-compressor.
Isishintshi sokushisa seKhabhinethi yeTelecom
Uchungechunge lwe-BlackShields HE I-Heat exchanger yakhelwe njengesixazululo sokupholisa sokulawula isimo sezulu sekhabhinethi yasendlini/yangaphandle endaweni eyinselele yasendlini nengaphandle. Isebenzisa izinga lokushisa lomoya wangaphandle, ishintshisane nge-counter counter flow recuperator esebenza kahle kakhulu futhi ngaleyo ndlela ipholise umoya wangaphakathi ngaphakathi kwekhabhinethi ikhiqize iluphu evaliwe yangaphakathi, epholile. Ixazulula ngokuphumelelayo inkinga yokushisa yekhabhinethi yangaphandle futhi isetshenziswa kabanzi emakhabetheni angaphakathi nangaphandle kanye nezindawo ezivaliwe ezinemishini ye-elekthronikhi ebucayi.
Iyunithi yokupholisa ye-BlackShields TC TEC Peltier yekhabethe yakhelwe ukupholisa iKhabhinethi yasendlini/yangaphandle ezindaweni zasendlini nezingaphandle eziyinselele. Isebenzisa ubuchwepheshe be-thermoelectric futhi yakhelwe ukuhlinzekwa kwe-48V DC. Ingasusa ukushisa okudlulele ezintweni zikagesi ezifana namabhethri ezivalekile ezincane futhi iyinketho enhle yokupholisa kwekhompathi yebhethri.
I-BlackShields DC Air conditioner yakhelwe ukulawula isimo sezulu sezinto zokusebenza kulawa masayithi angaphandle kwegridi enezindawo eziyinselele zasendlini nezangaphandle. Nge-DC compressor yangempela kanye nabalandeli be-DC, iyixazulula ngempumelelo inkinga yokushisa yekhabhinethi yasendlini/yangaphandle futhi iyisinqumo esihle seziteshi eziyisisekelo ezinamandla avuselelekayo noma amandla e-Hybrid kumasayithi angaphandle kwegridi.
Uchungechunge lwe-BlackShields AC Air conditioner yakhelwe ukulawula isimo sezulu sekhabhinethi ye-telecom ezindaweni eziyinselele zasendlini nezangaphandle. Ngomzila womoya omfushane kanye nokugeleza komoya okusatshalaliswe kahle, ixazulula ngokuphumelelayo inkinga yokushisa yekhabhinethi yasendlini/yangaphandle futhi iyisinqumo esihle sokufaka isicelo se-telecom.